Ukufunda: ukuphuza izidakamizwa kungenzeka Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Learning Unlearning
"Ukungakwazi ukufunda kwekhulu le-21st ngeke kube yilabo abangakwazi ukufunda nokubhala, kodwa labo abangakwazi ukufunda, bafunde futhi bafunde."
- U-Alvin Toffler, ingcwethi yesikhathi esizayo (Toffler, A.
Isimo kanye nokulutha imithi kusempeleni imikhuba ejulile. Njengoba sinikwe lokho esikwaziyo nge-neuroplasticity, kukhona ithemba lokuthi singakwazi ukwenza imikhuba engasize siphumelele. Ngenkathi amabalazwe ebuchopho esiwadalileyo akalokothi ahambe ngempela, anganciphisa ngokusebenzisa okungelona ukusetshenziswa. Ukugxila ekuthuthukiseni imikhuba emisha kuyinto efana nokuphuza izitshalo ezintsha nokuvumela abadala ukuba babune. Kuthatha isikhathi nemizamo eqhubekayo yokushintsha ukuziphatha njengezinkumbulo zenjabulo namagama okubangela lezo zinkumbulo zihlale zikhona ukuze zisilinge. Ngolwazi nokusekelwa, singakwazi ukufeza ushintsho olukhulu.
Ukuqaphela Isiyaluyalu-Isimo Esinye Isimo Sokuthi "Isiyaluyalu kuyisifo esiyinhloko, esingapheliyo somvuzo wobuchopho, isisusa, inkumbulo kanye nezifunda ezihlobene ..." kuyisandulela esikhulu futhi kungasiza ukususa inhlamba eye yayisihlanganiswa nokulutha esikhathini esidlule njengoba abanye uhlobo lokukhubazeka kokuziphatha noma ubuthakathaka. Kusisiza ukuba sibe nomqondo wokuziqhenya okusobala okukhangayo kwe-intanethi okuye kwabaningi abantu abahoxisiwe. Ubuchopho obuhle kakhulu kwi-IT kanye nezimboni zokukhangisa ziqinisekisile lokho.
Ukuthi umlutha futhi uyindlela, ukuziphatha okufundiwe, kungasiphazamisa amasu okuvimbela ngaphambi kokuthi thina, noma labo abasondelene nathi, slayishe kude kakhulu nokulawulwa, njengoba indlela emuva ingaba yinde futhi ibe nzima.
Indaba ye-frog iyinhlangano yokufunda ewusizo lapha. Indaba iyaba ukuthi abacwaningi babeka i-frog emanzini ashisayo. Kwaphuma ngokushesha, ukuphendula kwengcindezi yemvelo ukuzwela usongo ngokushesha. Lapho befaka leli frog emanzini abandayo kodwa futhi kwashisa ukushisa kancane, le frog yabizwa futhi yafa. I-frog yayijwayele ukunyuka kancane kancane ekushiseni futhi impendulo yokucindezeleka yemvelo yaba yinto engasebenzi ekulondolozeni impilo yayo. Lokhu kungenzeka kunoma ubani uma silahlekelwa ukuzwela kokusongela futhi impendulo yethu yokucindezeleka ayiphumeli ukusigcina siphephile.
<< Izithombe Zobulili Ezingcolile Nasekuqaleni Ukulutha Kwe-inthanethi >>